လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း(ဖျာပုံမြို့နယ်) – Than Lwin
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ဖျာပုံမြို့နယ်)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၂၁. ၁၀. ၂၀၁၉ မှ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉၊ ထိ ) လေးရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုးကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲနှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ် တို့တွင်ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သည်။ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ဒေသခံံရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့့မှ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ မြို့နယ်ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစိီမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ဖျာပုံမြို့နယ်)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၂၁. ၁၀. ၂၀၁၉ မှ ၂၄. ၁၀. ၂၀၁၉၊ ထိ ) လေးရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုးကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲနှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ် တို့တွင်ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သည်။ ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ဒေသခံရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ မြို့နယ်ရေလုပ်သားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Previous Post: လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း (ဒေးဒရဲမြို့နယ်)
Next Post: သံလွင်၏ အစီရင်ခံစာ(၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ )